Golf bọọlụ, iche Golf bọọlụ, Tour Golf bọọlụ - Vensen
2 PC Range bọọlụ
Njem PC 2
2-PC njegharị bọọlụ
3-PC njegharị bọọlụ (Ionmoer)
3-PC njegharị bọọlụ (Urethane)
VENSEN Golf bụ a ụlọ ọrụ nke monopolizes n'ichepụta, imewe, mmepe na ahịa nile di iche iche nke golf bọọlụ. The factory-ekpuchi ebe ndị 5, 000 square mita. The ụlọ ọrụ dị na Jiangsu Province, China, na-adaba adaba njem na mma obodo gburugburu ebe obibi.
The ụlọ ọrụ na-eji ndị mba ọzọ na mbubata ngwá, ikikere ngwaọrụ, na nwere a ogbe nke ọkà ahụmahụ ọkachamara oru pesonel, iji hụ na ọ bụla golf bọl si factory nwere pụrụ ịdabere na-elu mma.
Ndụmọdụ maka ndị mbido ịkụ gọọlụ nke ime ụlọ
Nkwenye na China Ọ dịghị Mkpa Egwu
Nye anyị gị email na ị ga-kwa emelitere na ọhụrụ ihe, n'ụzọ zuru ezu!